ဘာ….စံလင်းက အာရုံလွှဲတာ! အဲလိုသာဆိုရင်တော့ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားတွေက စံလင်းလောက်တောင် အသုံးမကျဘူးလို့ပဲ ပြောချင်တယ်။
ဆိုင်တာပေါ့ဗျာ။ စံလင်းလို ရူးတူးတူး ပေါတောတော လူလောက်ကိုမှ မကျော်နိုင်ရင်တော့ နိုင်ငံရေး လုပ်မနေနဲ့တော့။
ဟုတ်ပါတယ်။ စံလင်းလို ပေါတောတော လူတွေက မြန်မာတစ်ပြည်လုံး မပြောနဲ့။ ဝန်ကြီးလောကမှာတောင် ရိုက်သတ်လို့ မကုန်ဘူး။ အဲလို အရူးတွေ နှောင့်ယှက်တိုင်းသာ အလုပ်မဖြစ်ရင် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ အရည်အချင်းက ဘာလဲ?
အဲလိုတော့ မဟုတ်သေးဘူးလေ။ မြန်မာပြည်မှာက ခပ်ပိန်းပိန်းလူတွေများတာ။ ဒီတော့ ခပ်ပေါပေါလူတွေနောက်ကိုပဲ လူတွေက လိုက်သွားတာ။ ဒီတော့ ခေါင်းဆောင်တွေကို အပြစ်မပြောသင့်ဘူး။
ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေ ထားပါဦး။ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ ဒီနဂါး ကိစ္စမှာ လူတွေက ခင်ဗျားပြောသလို မခေပါဘူး။ စံလင်းလိမ်သမျှ ယုံနေတဲ့လူထက် လှောင်နေတဲ့လူကပဲ ပိုများပါတယ်။
ကွာသွားတာက စံလင်းက ၄၂ ရက် ရူးတာ မဝလို့ နောက်ထပ် ရက် ၂၀ ထပ်ရူးမယ်လို့ မျက်နှာပြောင်တိုက် ကြေညာနေတဲ့ အချိန်မှာ ခင်ဗျား ခေါင်းဆောင်တွေက ကိစ္စတစ်ခုကို ဆယ်ရက်လောက်ပြောပြီးရင် အတိတ်မေ့သွားတာ များတယ်။
ခင်ဗျားကလည်းဗျာ။ စွတ်တော့ မပြောပါနဲ့။ သူတို့ခမျာ တပ်မတော်အားကိုးနဲ့ လုပ်နေရတာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ လူထုအားကိုးနဲ့ လုပ်နေရတာ။
ကျွန်တော်က သူတို့လုပ်တဲ့ ရလဒ်တွေကို ကြည့်ပြီး ပြောနေတာတောင် မဟုတ်သေးဘူး။ လုပ်ရပ်ကိုပဲ ကြည့်ပြီးပြောနေတာ။ လုပ်ပြီး မအောင်မြင်တာဆို အပြစ်မပြောပါဘူး။ ခုတော့….ဘယ်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ကများ ကိစ္စတစ်ခုကို သေချာ အစီအစဉ်ဆွဲပြီး တစ်စိုက်မတ်မတ် လုပ်နေလို့လဲ။ တစ်လလောက်ကျော်ရင် မေ့သွားကြတာများတယ်။ လေထဲမှာ တိုက်ဆောက်တာ၊ ရေထဲမှာ အရုပ်ဆွဲတာ၊ ကလေးတွေ သဲနဲ့ ရဲတိုက်ဆောက်တာ၊ ဂိမ်းထဲမှာ ခြံစိုက်တာ၊ အိမ်မက်ထဲမှာ ထီပေါက်တာ ထက်တောင် ဆိုးနေပြီ။
လူတွေ သန်းနဲ့ချီပြီးသာ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ကြရတယ်။ အခုတော့ ထိုးလိုက်ရတဲ့ လက်မှတ်က …….
တစ်နေကုန်ဘာမှ သင်မပေးဘဲ ကျောင်းသားတွေကို စာသင်ခန်းထဲမှာ ထောင်သားဆန်ဆန် အကျဉ်းချထားလို့….ကျောင်းသားတွေ ခမျာ ညနေ အိမ်ပြန်ခါနီးကျမှ ကောက်ထိုးလိုက်ရတဲ့ roll call လက်မှတ်ထက်တောင် တန်ဖိုးမဲ့နေသေးတယ်။
ကောင်းကင်ကို (၁၉-စက်တင်ဘာ-၂၀၁၄ တွင် လူထုမေတ္တာခံယူသည် :D )
Posted by Kaung Kin Ko at 11:28 PM